Akụkọ - ọrụ nchekwa oyi na ikekọrịta ahụmịhe mmezi
Nkwadebe tupu ịmalite
Tupu ịmalite, lelee ma valves nke unit ahụ dị na mmalite mmalite nkịtị, lelee ma isi iyi mmiri jụrụ oyi zuru oke, ma debe okpomọkụ dị ka ihe ndị a chọrọ mgbe ị gbanyechara ike.A na-achịkwa usoro refrigeration nke nchekwa oyi na-akpaghị aka, ma ekwesịrị ịgbanye mgbapụta mmiri jụrụ oyi mgbe ejiri ya mee ihe maka oge mbụ, na compressors kwesịrị ịmalite otu otu mgbe arụ ọrụ nkịtị gasịrị.
Lezienụ anya na isi ihe ndị a mgbe arụ ọrụ nkịtị nke sistem refrigeration:
1. Gee ntị ma ọ dị ụda na-adịghị mma n'oge arụ ọrụ nke akụrụngwa;
2. Lelee ma okpomọkụ dị na ụlọ nkwakọba ihe na-adaba;
3. Lelee ma ọkụ na oyi nke iyuzucha na mmiri ara dị iche, yana ma mmetụta jụrụ oyi nke condenser bụ ihe nkịtị.
Igwe ikuku na kpochapu
Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ga-ahapụ ụfọdụ gas n'oge nchekwa, na mkpokọta ruo n'ókè ụfọdụ ga-eme ka physiological ọrịa nke mkpokọta, deterioration nke àgwà na uto.Ya mere, a na-achọkarị ikuku ventilashị mgbe a na-eji ya eme ihe, na n'ozuzu kwesịrị ime n'ụtụtụ mgbe okpomọkụ dị ala.Tụkwasị na nke ahụ, evaporator ga-emepụta oyi akwa oyi mgbe ejiri nchekwa oyi mee ihe ruo oge ụfọdụ.Ọ bụrụ na ewepụghị ya n'oge, ọ ga-emetụta mmetụta jụrụ oyi.Mgbe ị na-ewepụ oyi, kpuchie ebe nchekwa ahụ ma jiri broom hichaa ntu oyi.Kpachara anya ka ị ghara ịkụ aka ike.
Maka onye na-ekpo ọkụ nke igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ: na-elele mgbe niile ọnọdụ na-ekpochapụ ma na-eme ka ọ dị irè n'oge, nke ga-emetụta mmetụta refrigeration ma mee ka mmiri mmiri laghachi azụ na usoro refrigeration.
Na-eleba anya ugboro ugboro ka ọ na-arụ ọrụ compressor wee lelee okpomọkụ iyuzucha ya.N'oge a na-arụ ọrụ nke oge, tinye uche pụrụ iche na ọnọdụ ọrụ nke sistemu ahụ, ma mezie usoro mmiri mmiri nke sistemu na ikpo ọkụ n'oge.
Na-arụ ọrụ nke otu: Na-eleba anya mgbe niile ọkwa mmanụ na nlọghachi nke compressor na ịdị ọcha nke mmanụ.Ọ bụrụ na mmanụ ruru unyi ma ọ bụ ọkwa mmanụ dara ada, dozie ya n'oge ka ịzena mmanu na-adịghị mma.
Gee ntị nke ọma n'ụda arụ ọrụ nke compressor, ụlọ elu jụrụ oyi, mgbapụta mmiri ma ọ bụ fan condenser, wee dozie nsogbu ọ bụla n'oge.N'otu oge ahụ, lelee vibration nke compressor, ọkpọkọ iyuzucha na ụkwụ.
Nlekọta nke compressor: Ime ịdị ọcha nke sistemụ adịghị mma na ọkwa mbụ.Ekwesịrị dochie mmanụ refrigerating na nzacha nzacha mgbe ụbọchị 30 gasịrị, ma dochie ya ọzọ mgbe ọkara afọ nke ọrụ gasịrị (dabere na ọnọdụ ahụ n'ezie).Maka sistemu nwere ịdị ọcha dị elu, a ga-edochi mmanụ refrigerating na drier nzacha otu ugboro mgbe ọkara afọ nke ọrụ gasịrị, dabere na ọnọdụ n'ọdịnihu.
Maka nkeji ikuku jụrụ oyi: hichaa ikuku ikuku ugboro ugboro ka idobe ya na ọnọdụ mgbanwe okpomọkụ dị mma.Maka nkeji mmiri jụrụ oyi: Lelee turbidity nke mmiri jụrụ oyi ugboro ugboro.Ọ bụrụ na mmiri jụrụ oyi ruru unyi, dochie ya.Lelee usoro inye mmiri maka afụ, ntapu, ntapu na ntapu.Ma mgbapụta mmiri na-arụ ọrụ nke ọma, ma valvụ ahụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma, yana ma igwe ikuku jụrụ oyi ọ bụ ihe nkịtị.
8.N'ihi na evaporator nke igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ: mgbe niile na-elele ọnọdụ nkwụsịtụ, ma ọ bụrụ na nkwụsịtụ dị irè n'oge, ga-emetụta mmetụta refrigeration, ma mee ka mmiri mmiri laghachi azụ na usoro refrigeration.
9.Ugboro ugboro na-ekiri ọnọdụ ọrụ nke compressor: lelee okpomọkụ nke mgbapụta ya, ma tinye uche pụrụ iche na ọnọdụ ọrụ nke usoro ahụ n'oge ọrụ oge, ma gbanwee usoro mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na okpomọkụ nke oge.
10. Gee ntị nke ọma na ụda arụ ọrụ nke compressor, ụlọ elu jụrụ oyi, mgbapụta mmiri ma ọ bụ onye na-eme ihe ike, ma na-emeso ihe ọ bụla na-adịghị mma na oge.N'otu oge ahụ, lelee vibration nke compressor, ọkpọkọ iyuzucha na ụkwụ.
11.Maintenance nke compressor: Ime ịdị ọcha nke usoro adịghị mma na ọkwa mbụ.Ekwesịrị dochie mmanụ refrigerating na nzacha nzacha mgbe ụbọchị 30 gasịrị, ma dochie ya ọzọ mgbe ọkara afọ nke ọrụ gasịrị (dabere na ọnọdụ ahụ n'ezie).Maka sistemu nwere ịdị ọcha dị elu, a ga-edochi mmanụ refrigerating na drier nzacha otu ugboro mgbe ọkara afọ nke ọrụ gasịrị, dabere na ọnọdụ n'ọdịnihu.